Kulanti wacan oo wanaagsan akhirstayaal markaanna ku soo dhawaada qiso jaceyl oo gaaban qeybtii 2-aad, hadaba waa qiso nuucee ah?
Qisadani waa qiso jaceyl oo taxane ah oo aad kala socon doonto bogga mucaashqiinta ee erayojaceyl.com. Waxaan horay uga soo hadalnay qeybtii koobaad. Hadaba maanta waxaan soo qaadaneynaa qeybtii labaad.
Sida aan horay idin kaga balan qaadnay waxaan si joogto ah u wadi doonaa qisooyinka ku saabsan arimaha jaceylka iyo nolosha.
Akhrinta qiso jaceyl oo gaaban faaiidada ay leedahay waxaan kaga soo hadalnay qeybtii koobaad. Haddi aad xiiseyneyso akhirnta qiso jaceyl oo gaaban qeybaheedii kale waxaan kuu dhigi doonaa qeybta hooseyso. Adigoo u baahan oo kaliya inaad riixdo linkigaas.
Maxay xambaarsan tahay qisadani?
Ma dooneyno inaan halkaan ku sharaxno waxay ay qisadani xambaarsan tahay mana rabno inaan ka hor dhacno jawaabteeda, maxaa yeelay waxaan rabnaa inaad fahantaan ujeedada qisadani laga ay leedahay. Hadaan sii lafa gurno qisadani ma ahan qiso aad u dheer mana ahayn qiso adag, waxaan umaleyn inay tahay mid aad u fudud oo qof walbaa fahmi karo.
Waxaa jiray wiil yar oo jacaylkiisa koobaad jeclaaday gabar yar oo uusan aqoon u lahayn marka laga reebo sawirkeeda uu ka helay wadada kana soo qaaday ... Waqti ka dib ayuu guursaday, Laakiin weli sawirkii wuu xafidayay oo wuxuu galiyay sanduuq. Maalin maalmaha ka mid ah, ayaa xaaskiisii sawirkii heshay oo weydiisay, "Xaggee ka heshay sawirkaan?" Ninkii wuxuu yiri "sawirkani ilaa yaraanteydii waan xafidayay, Laakiin maxaa ii weydiisay?" Gabadhii ayaa ku jawaabtay, "Waxaan lumiyay sawirkan markii aan ahaa 7 jir..." :)
Hadaba maxaad ka fahantay qisadani? Jawaabta inoo reeb comment. Waxaan rajeyneynaa inaad ka heshay qisadani qeybteedi labaad, la soco qeybta xigta.
Sidoo kale haddii aadan horay u akhrisan qisadani qisadii ka horeeysay qeybteedii koobaad halkaan riix oo ka ka akhriso. Nabadgelyo!